» चलचित्र छोडेर महानायक राजेश हमालले चिया पसल व्यवसाय सुरु गरे! “हमाल चिया पसल”खानेको ओइरो ! हेर्नुहोस भिडियो… चलचित्र छोडेर महानायक राजेश हमालले चिया पसल व्यवसाय सुरु गरे! “हमाल चिया पसल”खानेको ओइरो ! हेर्नुहोस भिडियो… – हाम्रो खबर
चलचित्र छोडेर महानायक राजेश हमालले चिया पसल व्यवसाय सुरु गरे! “हमाल चिया पसल”खानेको ओइरो ! हेर्नुहोस भिडियो…
नेपालका चर्चीत महानायक राजेश हमाल, एउटा चिया पसलमा देखिएका छ्न । आर्टिस्ट खबरले लिएको अन्तरवार्तामा उनी चिया पसलमा भेटिएका हुन । उक्त चिया पसलमा हमाल आफैंले चिया बेचेको देख्न सकिन्छ । हमाल चिया पसल राखिएको उक्त चिया पसल अहिले सामाजिक संजालभरी भाइरल भइरहेको छ। भिडियो अन्तिममा छ स्क्रोल डाउन गर्नुहोस..
यो पनि पढ्नुहोस;-
नायक राजेश हमाल बिहिवारदेखि ५२ वर्षमा लागेका छन् । वि.सं २०२१ साल जेठ २७ मा तानसेन पाल्पामा जन्मेका नायक हमाल चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’ वाट अभिनयमा प्रवेश गरेका थिए ।
आफ्नै मामा स्व. दीपक रायमाझी निर्देशित चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’वाट फिचर फिल्ममा प्रवेश गरेका हमालले पहिलो चलचित्रवाटै अत्याधिक चर्चा पाए ।
अभिनयमा प्रवेश गर्नुअघि भारतवाट प्रकासित फेशन नेट म्यागजिनमा उनले फोटो शेसन गरेका थिए भने काठमाडौमा सम्पन्न केहि फेशन शोमा र्‍याम्प मोडलिङ समेत गरेका थिए ।
काठमाडौमा होस् वा काठमाडौ बाहिर सुटिङमा जाँदा उनको साथमा पुस्तक कहिल्यै छुट्दैन थियो । वर्षको एकपटक घुम्न भन्दै अमेरिका वा बेलायत जाने गरेका हमालले फर्केर आएपछि पनि पुस्तककै कुरा गर्थे ।
एक समय नाउक हमाल र नायिका करिश्मा मानन्धरको ‘रिललाईफ रोमान्सको निकै चर्चा हुन्थ्यो । ‘ढुकढुकी, अल्लारे, यो मायाको सागर, साथी, बसन्ती’ लगायतका चलचित्रमा उनले करिश्माको जोडी बनेर अभिनय गरेका छन् ।
केही महिलाहरुसँग उनको नाम जोडिएपनि उनको प्रेमप्रसंगको चर्चा त्यति भएन । ५० वर्षको उमेरमा उनले मोडल मधु भट्टराईसँग प्रेमविवाह गरेका थिए ।